Ny excavator China dia manamafy ny mpamokatra sy mpamatsy siny vita amin'ny tany | MINYAN
Tombontsoa ho an'ny vokatray 1) fenitra nasionaly 2) fitaovana avo lenta 3) haingam-pandeha, 4) henjana be, 5) Ela velona sy fahaiza-mitondra matanjaka, 6) Nandalo ny fanaraha-mason'ny departemantan'ny fahefana nasionaly. 8) Nahazo ny fitokisan'ny mpanjifa taloha.
Ny excavator dia manamafy ny siny vita amin'ny tany manana volo matevina ambany sy sisiny kokoa, manatsara ny fanoherana ny akanjo ary manana fotoana fanompoana lava kokoa noho ny siny mandavantaona. Io no fomba fanao amboarina excavator malaza indrindra. Safidy "tsipika afovoany" tsara, na teboka fanombohana, rehefa tsy dia fantatra loatra ny fepetra fampiharana.
Ho an'ny karazam-bika sy fihenan-tsakafo isan-karazany ao anatin'izany ny loto mifangaro, tanimanga ary vato. Ohatra: Ny fepetra fitrandrahana izay misy ny fiainana Penetration Plus dia 400 ka hatramin'ny 800 ora.
manamafy ny siny vita amin'ny tany ny excavator dia asaina manaparitaka ny asa-miasa, ary ho an'ny mpandraharaha ankapobeny miasa amin'ny toe-javatra samihafa. Ny takelaka ambany sy ny lafiny matevina dia mitafy volo noho ny General Duty Buckets ho mateza bebe kokoa. Adaptatera sy torohevitra momba ny siny dia lehibe ho an'ny fampivoarana sy faharetana maharitra. Ny sidebars dia atsofoka mialoha ho an'ny mpikapa amin'ny lafiny tsy voatery, ary amin'ny tranga maro dia miaro ny sisiny.
Fahaizana manomeFahaizana manome:300 Piece / Pieces isam-bolana bucket excavator
Fonosana sy fandefasanaAntsipirian'ny fonosanapaleta hazoPortQingdao / ShanghaiFe-potoana :
Xuzhou Minyan Import & Export Co., Ltd dia mpanamboatra mpamatsy excavator any Sina. Ny kalitaon'ny vokatra rehetra dia voafehy fatratra hatramin'ny fanodinana ka hatramin'ny fandefasana. Amin'ny alàlan'ny fanavaozana sy fanatsarana mitohy, nahazo ny orinasa ISO 9001, fanamarinana CE ary patanty ara-teknika misesy. Ny vokatray dia amidy amin'ny mpanjifa eto an-toerana sy any ivelany ary efa an-dàlam-pandrosoana maharitra novolavolaina Ny iraka ataontsika dia: Ny kalitao voalohany, ny laharam-pahamehana amin'ny asa fanompoana ary ny fanavaozana Ny fanoloran-tena tsy misy fampanjariana amin'ny serivisy avo lenta sy be fieritreretana dia manome antsika laza tsara sy mpiara-miasa ho avy. Ary hanatsara hatrany ny vokatra izahay mba hanompoana bebe kokoa ny tsena eran'izao tontolo izao. Manantena ny hiara-miasa aminao izahay!
Ity siny ity dia namboarina tamina pin recessed patenty mba hanomezana fangady faran'izay betsakafampisehoana raha mitazona ny fahaiza-manao sy ny fahamoran'ny mpiray tsikombakomba. Tip radius diamihena ary mamela fanatsarana hatramin'ny 10% ny hery fialan-tsasatra raha ampitahaina amin'ny apaingotra mahazatra amin'ny fangaro amin'ny siny sy mpiray.Ny siny fampisehoana Pin Grabber dia azo alaina ho an'ny mpitrandraka 315–349, amin'ny ankapobenyTanjona sy faharetan'ny adidy henjana.
Ny Power Bucket dia ampiasaina amin'ny fampiharana mahery vaika izay misy ny hery misintona sy ny fotoana tsingerinamanakiana - ary ampiasaina amin'ny akora toy ny loto mifangaro sy vato mifangaro mafy. (Tsyatolotra ho an'ny tanimanga.) Ny hery misintona dia mihabe noho ny fihenan'ny tadin'ny tendrony syniitatra pin nitombo. Ny fe-potoana tsingerin'ny masinina amin'ny ankamaroan'ny fitaovana dia nohatsaraina mihoatra ny fenitrasiny amin'ny fampiharana mitovy amin'izany.Azo amboarina ho an'ny mpitrandraka 320–336 ny siny mavesatra
Ny boaty avo lenta dia natao sy namboarina hampiasaina amin'ny famatrarana kamiao avo lentafampiharana. Amin'ny fampiharana sahaza azy ary apetraka, ireo siny ireo dia hifindra fitaovana bebe kokoaamin'ny habetsahan'ny pass - mampitombo ny famokarana.Ny siny avo lenta dia azo alaina ho an'ny mpitrandraka 336–390, amin'ny faharetan'ny adidy ankapobeny.
Manaraka: nify bucket excavator